News - ရေခဲသေတ္တာအခြောက်အသစ်များအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ
အလေးချိန်အားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကုန်ကြမ်းများ 1. ရေးစပ်သီကုံး: မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အသား 100 အစိတ်အပိုင်းများ, ရေ2အစိတ်အပိုင်းများ, ဂလူးကို့စ 12 အစိတ်အပိုင်းများ, glycerin 8 အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စားပွဲပေါ်မှာဆားများအတွက် 0.8 အစိတ်အပိုင်းများ။ ၎င်းတို့အနက်မွေးမြူရေးအသားမှာကြက်ဖြစ်သည်။
(၁) ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်သားအသားများကိုတိရစ္ဆာန်နှင့်ကြက်၊ ယင်းပုံသေနည်းအချိုးအစားနှင့်အညီမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အသား, ရေ, ဂလူးကို့စ, က glycerol နဲ့ဆားပြင်ကြလော့
(၂) ရေခဲခြင်း - တိရိစ္ဆာန်နှင့်ကြက်ဘဲအသားကိုအပြည့်အ ၀ ရွေးချယ်ပြီး ၁၀ နာရီဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ထားရှိပြီး ၁၂ နာရီကြာအေးခဲနိုင်သည်။
(၃) အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပါ။ အရည်ပျော်နေသောအသားများနှင့်ကြက်များမှရွတ်၊ အသားအရေနှင့်အဆီများကိုဖယ်ထုတ်ပြီး၊ လုပ်ကွက်ပုံစံမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အသားရရှိရန်အပိုင်းပိုင်းခွဲပါ။ မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အသားများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ချွတ်, စတုရန်း, စိန်, တြိဂံသို့မဟုတ်အခြားပုံစံမျိုးစုံဖြစ်ပါသည်
(၄) သန့်ရှင်းရေး။ ဖြတ်ထားသောတိရိစ္ဆာန်နှင့်ကြက်သားအသားများကိုသန့်ရှင်းသောရေတွင်ထည့်ပြီးနောက်တစ်ခါဆေးကြောပါ။
(5) သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း: အကိုရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖို့ယိုစီးမှုဗန်းအပေါ်ကိုလျှော်မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အသားတင်နှင့်5℃မှာ 60 မိနစ်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်;
(၆) Tumble - မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်ဘဲအသားပမာဏကို tumbler ထဲထည့်ပြီးရေ၊ ဂလူးကို့စ်၊ glycerin နှင့်ဆားပုံသေနည်းကိုထည့်ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အသားအရောအနှောရရှိရန် tumbleer လှိမ့်ပါ; ထိန်းချုပ်အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ် parameters တွေကိုနေသောခေါင်းစဉ်: -0.06Mpa မှရွှေ့ပြောင်းဖြစ်ပါတယ် kneader အဆိုပါလိမ့်ကျခြင်းပြီးနောက် 60r / မိနစ်တစ်မြန်နှုန်းမှာ 10 မိနစ်ရှေ့ဆက်လှည့်လိမ့်မည်နှင့် 10 မိနစ် reverse;
(၇) ရပ်နေခြင်း - ပထမမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်သားအသားအရောအနှောကိုကွန်တိန်နာထဲသို့ထည့်ပြီးဒုတိယမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အသားအရောအနှောကိုရရှိရန် ၄ -၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ရပ်ပါ။
(8) ပန်းကန်နှင့်ကင်ထားပါ: ဒုတိယမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်ဘဲအသားအရောအနှောကိုအသားတင်ဗန်းထဲတွင်ထားပြီးလျှင်ခြောက်သွေ့စေရန်ခန်းခြောက်ထဲထည့်ပါ။ အဆိုပါခြောက်သွေ့အပူချိန် 45 ဖြစ်ပါတယ်° C နဲ့ခြောက်သွေ့အချိန်6နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောတတိယမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အသားအရောအနှော;
(၉) အအေး - စတုတ္ထမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်ဘဲအသားအရောအနှောကိုပုံမှန်အပူချိန်နှင့်ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အေးအောင်ထားခြင်း၊ အပူချိန် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ လေထုစိုထိုင်းဆ ၄၀%၊ အအေးချိန် ၆ နာရီဖြစ်သည်။
(၁၀) မြန်မြန်ဆန်ဆန်အေးခဲခြင်း - ပဉ္စမမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်ဘဲအသားအရောအနှောများကိုပဉ္စမမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်ဘဲအသားအရောအနှောများရရှိရန်အတွက်လျင်မြန်စွာခဲနေသောဂိုဒေါင်တစ်ခုထဲသို့ထည့်သွင်းပါ။ အပူချိန် -40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, အချိန် 8 နာရီအေးခဲ;
(၁၁) အေးခဲနေသောခြောက်သွေ့ခြင်း - အေးခဲခြောက်သွေ့စေသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာရရှိရန်ခြောက်သွေ့ရန်အတွက်ငါးမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်သားအသားအရောအနှောကိုအေးခဲနေသောအခြောက်ခံစက်တွင်ထည့်ပါ။ လီယိုဖီလီယံအချိန်သည်နာရီ (၂၀) ​​ဖြစ်ပြီး၊
(၁၂) သတ္တုရှာဖွေခြင်း - ရရှိသောအေးခဲနေသောအခြောက်ခြောက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာကိုပိုက်ကွန်ထဲတွင်ထည့်ပြီးသတ္တုရှာဖွေစက်မှသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုရွေးပါ။ သတ္တုရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ Fe: 2mm၊ SuS: 1mm;
(၁၃) ထုပ်ပိုးခြင်း - လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်လေဟာနယ်စက်ကိုသုံးပါ။
(2) လျင်မြန်စွာအေးခဲ။ နမူနာကိုအမြန်အေးခဲ။ နေရာချပြီး -18 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အေးခဲအောင်ထားပါ။
(3) မုန့်ဖုတ်။ ပစ္စည်းကိုဖယ်ရှား, မုန့်ဖုတ်ဗန်း၌ထား။ , မီးဖိုထဲသို့ပို့ပါ။ မီး (အပေါ်နှင့်အောက်သို့ဆင်းပါ၊ ၁၅ မိနစ်5၅ မိနစ်ခန့်ကင်ပါ။ ထို့နောက် ၁၃၀ 10 ၁၀ မိနစ်သို့လှည့်ပါ) ။ ပြင်ဆင်ထားသည့်အသားပေါ်တွင်ပြင်ဆင်ထားသောပျားရည်ကိုရေဖြန်းပြီးမီးဖိုထဲသို့ပြန်ပို့ပါ (မီးနှင့်အထက်၊ ၁၃၀ ℃၊ ၅ မိနစ်) ။ ၎င်းကိုထုတ်ယူပြီး၊ စက္ကူအလွှာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ မုန့်ဖုတ်ရန်အိုးကိုဖွင့်ပါ။ ပျားရည်ဖြင့်ဖြန်းပြီးနောက်ဆုံးတွင်မီးဖိုထဲသို့ပို့ပါ။ မီးနှင့်အထက် (၁၃၀ ℃၊ ၂၀ မိနစ်မီးဖိုထဲရှိနိုင်သည်) ။ လှော်ပြီးသားအမဲသားကိုထောင့်မှန်စတုဂံပုံသဏ္intoာန်ခွဲပါ။